Radio Don Bosco - Boky Volamena
Izay mitonona anarana ihany no afaka mametraka hafatra. Mitonòna anarana (na manokafa kaonty raha mbola tsy manana)
Rahaja Tolotra: Mirary soa e!
Faly miarahaba ny Radio Don Bosco amin'izao fankalazana ny Jobily izao. Mankasitraka indrindra anareo amin'ny fanabeazana ara-pinoana voalohany indrindra, ary manaraka azy eo ny fanabeazana ny maha-olona amin'ny lafiny rehetra. Mirary soa amin'ny taona marobe mbola hifandimby e!
RANDRIAMANALINA Tsalama: Ancien stagiaire Media Don Bosco
Faly miarahaba ny RDB amin'izao faha-25 taona izao. Radio tena mahafinaritra ary indrindra nahitàna soa. Izaho dia "stagiaire en communication et radiodiffusion" tao amin'ny RDB. Na tsy miasa amin'ny radio aza amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny fahalalana azo tao amin'ny RDB amin'ny asa fampiofanana ataoko sy ivelomako ankehitriny. Andiany tamin'ny taona 2001 izahay ary anisan'ny nampianatra anay tamin'izany ry Jean Claude Andrianaivo, Père Cosimo Alvati, Père Rosario... sy ireo matianina rehetra tao amin'ny RDB tamin'izany. Mbola mieritreritra tetikasa hizara traikefa amina karazana fandaharana manentana ny olona handraharaha sy hiasa tena ihany amin'izao. Mankasitraka ary ho tratry ny 25 taona manaraka e!
RAVELOARISON Tokiniaina Jean Yves valéri...: rdb
Miarahaba ny Radio Don Bosco nahatratra ny faha 25 taona, enga anie hitohy hatrany ny asa fampielezana ny Vaovao Mahafaly amin'ny onjam-peo, ny fanirianay mpihaino dia hatratra ny 25 taona manaraka indray ary efa te ahita TV Don Bosco, misaotra eee...!!!
DIMBINIAINA Tsilavina Jules: Fanamarihana ny faha 25 taona, RDB
Mirary soa ho an'ny Radio Don Bosco, hisaorana izay efa nataonareo ary mirary 25 taona manaraka feno fahombiazana.
Ho ela velona anie ny onjam-peo, hifanantitra amin'ny vaky sy jery, hiseharan'ny Saleziana rehetra miaraka amin'ny sakaiza arak'asa.
Mirary fety sambatra e!!!